NamasteNEPALI.com: ५० लाखसम्म दलाललाई बुझाएर अमेरिका छिर्न खोज्ने सयौ नेपालीहरु जेलमा सास्ती खेप्तै
५० लाखसम्म दलाललाई बुझाएर अमेरिका छिर्न खोज्ने सयौ नेपालीहरु जेलमा सास्ती खेप्तै
किशोर पन्थी/ न्युयोर्क, ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर मेक्सिकोको बाटो हुँदै हरेक दिनजसो नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने गर्छन् । जंगल, समुन्द्र र जेल हुँदै अमेरिकासम्मको यात्रा तय गर्ने क्रममा कतिपय नेपालीहरु जंगली जनावरको शिकार हुन्छन् । कतिपय समुन्द्रमा डुंगा डुबेर गोही र सार्कको शिकार हुन्छन् । कतिपय अमेरिका आउनु अगाडि नै अन्य देशमा पक्राउ परेर उतैबाट फर्काइन्छन् । यतिधेरै जोखिमका बीच पनि मेक्सिको हुँदै नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने क्रम घट्दो छैन, बरु बढ्दो छ ।
‘जति सुविधा भएपनि जेल भनेको त जेल नै हो, बाहिरजस्तो स्वतन्त्रता हुँदैन’
बासु फुलारा, कानुन व्यवसायी
(न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी बासु फुलारा अमेरिकाका कैयन अध्यागमन जेलहरुमा पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेर जेलभित्र रहेका कैयन नेपालीहरुसँग कुराकानी पनि गरेका छन् । जेल भित्र रहेका कैयन नेपालीहरुका मुद्दा लडेर जेलबाट छुटाएका पनि छन् । उनले मुद्दा लडेर जेलबाट छुटेका कैयन नेपालीहरुले एसाइलम गरेर ग्रीनकार्ड समेत पाईसकेका छन् । केही दिन अगाडि टेक्सासको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा पुगेका फुलारासँग डिटेन्सन सेन्टरको परिसरमै लिईएको अन्तरवार्ताको मुख्य अंश ।)
नेपालीहरुको मुद्दाका सन्दर्भमा तपाई अहिलेसम्म कति अध्यागमन जेलहरुमा पुग्नुभयो ? अवस्था के छ ?
म धेरै राज्यहरुमा अध्यागमनका मुद्दाका सन्दर्भमा पुग्ने गरेको छु । झण्डै दुई दर्जन राज्यहरुमा अध्यागमनका मुद्दाका सन्दर्भमा म पुगेको छु । टेक्सासदेखि साउदर्न बोर्डर हुँदै बफेलोसम्मका कैयन अध्यागमन जेलहरुमा म पुगेको छु । अध्यागमन जेलमा भएका अधिकांश नेपालीहरु मेक्सिकोको बाटोहुँदै गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर अमेरिकामा आउनेहरु छन् । अध्यागमन जेलहरुमा पुगेर नेपालीहरुसँग कुराकानी गर्दा अधिकांशले मेक्सिकोबाट अमेरिकामा छिर्दै गर्दा पक्राउ परेको बताउने गरेका छन् । टेक्सासको सिमानादेखि एरिजोनाको सिमानासम्मबाट गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्न खोज्दा उनीहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफू नेपालमा जान नसक्ने अवस्था भएकाले अमेरिका आएको कुरा हामीसँग बताउने गरेका छन् । उनीहरुका मुद्दाहरु अदालतमा पनि पेन्डिङ अवस्थामा रहेका हुन्छन् । कतिजना धरौटीमा रिहा भएका पनि छन् । धरौटीमा रिहा भइसकेपछि उनीहरुले आफ्नो स्थान परिवर्तन पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि टेक्सासबाट अमेरिका छिरेकाहरु पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएपनि न्युयोर्क आएर न्युयोर्ककै अदालतमा उनीहरुको मुद्दा सारेको पनि पाइन्छ । डिटेन्सन सेन्टर (अध्यागमन जेल) वरपर वा त्यो क्षेत्रमा बस्ने गरेको कमैमात्र देखिएको छ । मुख्य हब टेक्सास, एरिजोना लगायतका क्षेत्र भएपनि केही बन्दीहरुलाई न्युयोर्कको बफेलोमा पनि सार्ने गरेको छ ।
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)ले छापा मार्दा भिसा अवधिभन्दा धेरै बसेका वा अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेकाहरु पनि पक्राउ पर्ने गरेका छन् । त्यसरी पक्राउ परेका नेपालीका मुद्दाबारे तपाईको अनुभव के छ ?
त्यसरी पक्राउ परेका नेपालीहरु थोरैमात्र रहे पनि अधिकांश सिमाक्षेत्रबाटै अमेरिका छिर्नेहरु रहेका छन् । नेपालीहरुको आपराधिक इतिहास त्यति धेरै देखिदैन । आईसले छापामार्दा वा कुनै राज्यमा कसैले अपराध गरेको छ भने बन्दीगृहमा राखिएका त्यस्ता नेपालीहरु १० देखि १५ प्रतिशत रहेका छन् । तर, प्रायजसो बन्दीगृहमा रहेकाहरु अध्यागमन कानुनको उल्लंघन गर्दै सिमाक्षेत्रबाट छिरेकाहरु नै छन् । मेक्सिको लगायतका देशका व्यक्ति पटकपटक डिपोर्टेशनमा पर्दा पनि अमेरिका छिरेको इतिहास भए पनि प्रायजसो निरीक्षण विना छिरेकाहरु (ईडब्लुआई) का नेपालीहरुका सन्दर्भमा उनीहरुको पुरानो त्यस्तोखाले इमिग्रेशन इतिहास देखिंदैन । नेपालीहरुले अपराध गरेको कमै रेकर्ड छ । उनीहरुलाई केहीसमय इमिग्रेशन जेलमा १५ सयदेखि पच्चिस तीस हजार डलरसम्म धरौटी तोकेर रिहा गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी धरौटीमा छुट्ने नेपालीहरु धेरै छन् । यदि उनीहरु धरौटीमा छुटेका छैनन् भने उनीहरुका लागि व्यक्तिगत सुनुवाईको मिति दिइन्छ । एसाइलम फाइल गरेका व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गरिएन भने उनीहरुको अदालती सुनुवाई अलिक छिटो हुने गरेको पनि देखिएको छ । नेपाललाई अमेरिकी सरकारले टीपीएस प्रदान गरिसकेपछि माहौल अलिकति नयाँ बनेको छ । हामीले जेलमा रहेका केही नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर टीपीएसका लागि आवेदन दिएका छौं । तर टीपीएस आउँदैमा अदालतबाट छुट्ने भन्ने नहुन सक्छ । न्यायाधिसले त्यसबारे समझदारी त गर्न सक्छ । तर न्यायाधिसलाई टीपीएस दिने अधिकार हुँदैन । टीपीएसबारे काम गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगत युएससीआईएसले हो ।
अध्यागमन जेलभित्र रहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरुले तपाईसँग जेलको अवस्थाबारे पनि केही गुनासो गर्ने गरेका छन् ?
अध्यागमन जेलमा एकदुईजना बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ सामुहिक रुपमा धेरै मान्छेहरुलाई राखिएको हुन्छ । त्यहाँ प्रदान गरिने खाना स्वास्थ्यवर्धक नै हुने सुनिने गरेको छ । जेलभित्र अरु खाले समस्याहरु भए पनि खानाबारे जेलभित्र रहेका नेपालीहरुले गुनासो गरेको मैले सुनेको छैन । मैले खानपिन र स्वास्थ्यउपचारबारे बेलाबेलामा सोध्ने पनि गरेको छु । उनीहरुले एउटै कोठामा धेरैजना हुँदा मिलेर बस्नुपर्ने र धेरैजना भएका कारण समस्या हुने गरेको बताए पनि खानाका बारेमा गुनासो गरेका छैनन् । तर जेल भनेको त जेल नै हो । बाहिरजस्तो जेलभित्र स्वतन्त्रता हुने कुरा भएन । स्वास्थ्य र खानाका बारेमा नेपालीहरुले खासै कम्प्लेन गरेका छैनन् ।
अध्यागमन जेलमा कोही नेपालीहरु छिट्टै छुट्छन् भने कोही महिनौंसम्म पनि छुट्न सकेका हुँदैनन् । के कारणले यस्तो हुनेगर्छ ?
यो मुद्दाहरुमा भरपर्छ । कतिपयको अध्यागमन इतिहासमा कुनै खराबी नहुँदा नहुँदै पनि धरौटीमा रिहा नगरेका घटनाहरु छन् । अध्यागमन जेलमा राख्नुको अर्थ मुद्दा लम्बाउने भन्ने होइन । कानुनी रुपमा पनि अध्यमगन जेलका मुद्दाहरु अत्यन्तै छिटो हेर्ने गरिएको छ । औंठाछाप लिएर पृष्ठभूमी परीक्षण गर्दा पनि अध्यागमन जेलमा बाहिरजस्तो ढिलो हुँदैन । कुनै अवस्थामा १ वर्ष वा त्यो भन्दा पनि ढिलो अवधीसम्म नेपालीहरुलाई अध्यागमन जेलमा राखिएको पाइन्छ । तर अध्यागमन जेलमा त्यहाँभित्रको खाना खुवाएर धेरै समय राख्ने सरकारी अवधारणा होइन । यदि कोही व्यक्ति आपराधिक मुद्दामा छ, अध्यागमन इतिहास खराब छ भने जेलभित्र राख्ने अवधि लम्बिन पनि सक्छ । धरौटीमा रिहा गर्नका लागि अनुरोध गरिएपछि कतिपयलाई त पैसा नलिइकनै पनि रिहा गरिएको पाइन्छ । धरौटीमा रिहा गरिएन भने र त्यो व्यक्ति एसाइलमका लागि योग्य छ भने एसाइलमको आवेदन दिन सक्छ । एसाइलमको मुद्दा जितेमा विना धरौटी ग्रीन कार्ड नै पाउनेगरी रिहा गरिन्छ । तर एसाइलमका लागि योग्य नभएमा वा एसाइलमको मुद्दा हारेमा उसलाई डिपोर्ट गरिन्छ ।
अहिले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई टीपीएसको दर्जा प्रदान गरिसकेपछि अध्यागमन जेलमा रहेका नेपाली बन्दीहरुले टीपीएसका लागि आवेदन दिएर जेलबाट छुट्नसक्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
अध्यागमन जेलमा रहेका नेपाली बन्दीहरु पनि टीपीएसको आवेदनका लागि योग्य हुन्छन् । तर उनीहरुले टीपीएसका लागि प्रकृया अपनाउनुपर्छ । टीपीएस दिने अधिकार न्यायाधिसलाई हुँदैन । टीपीएसबारे अध्यागमन जेलमा रहेका नेपालीहरुलाई के प्रावधान हुने भन्ने गाइडलाइन अहिले पनि निस्केको छैन । टीपीएसको दर्जा प्रदान गर्नासाथ म टेक्सासको सिमाक्षेत्रमा रहेका जेलमा रहेका नेपालीहरुलाई भेट्न गएको थिएँ । टीपीएसको गाइडलाइन सरकारी वकिलहरुलाई पनि आएको छैन । तर नेपाली बन्दीहरुको टीपीएस आवेदन स्वीकृत भएमा उनीहरु विना धरौटी बन्दीगृहहरुबाट छुट्नसक्ने सम्भावना छ । टीपीएसबाट छुटेपछि पनि उसको मुद्दा अदालतमा भने चलिरहेको हुन्छ ।
बन्दीगृहबाट धरौटीमा छुटेका नेपालीहरुको बाँकी भविश्य केमा भरपर्छ ?
कुनै व्यक्ति धरौटीमा छुटेपछि उसको मुद्दाबारे फैसला हुन्छ । मुद्दाको फैसलापछि धरौटीबापत राखेको रकम फिर्ता पाउन सकिन्छ । धरौटीको सुनुवाई र एसाइलमको सुनुवाई फरक फरक हुन्छ । कुनै पनि बन्दीको वकिलले धरौटीमा छुटाउनका लागि आवेदन दिनसक्छ । अफिसरले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेमा त्यो मुद्दा अदालतमा जान्छ । त्यतिबेला धरौटीको सुनुवाईमा न्यायाधिसले पनि धरौटीमा रिहा नगर्ने फैसला गरेमा व्यक्ति बन्दीगृहभित्रै बसिरहनुपर्छ । धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला भएमा धरौटी राखेर व्यक्ति रिहा हुन्छ । धरौटीमा रिहा भएको व्यक्तिले एसाइलम वा अन्य कुनै अध्यागमन सुविधाका लागि आवेदन नदिएमा उसलाई देश निकालाको फैसला हुन्छ । तर अहिले टीपीएसका लागि आवेदन दिएमा र त्यस्तो आवेदन स्वीकृत भएमा भने उसले टीपीएस अवधिभरका लागि अस्थायी सुरक्षा प्राप्त गर्छ । धरौटीमा रिहा भएपनि रिहा नभएपनि एसाइलम वा टीपीएस फाइल गरेको छैन वा फाइल गरेर पनि स्वीकृत भएन भने उसको भविश्य डिपोर्टेशन नै हो ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा टेक्सासमा रहेको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टर अगाडि कानुन व्यवसायी बासु फुलारासँग कुराकानी गर्दै पत्रकार किशोर पन्थी ।
‘दुब्र्यबहार भएमा बन्दीहरुले मौखिक र लिखित रुपमा उजुरी गर्नसक्ने प्रणाली छ’
भिन्सेन्ट पिकार्ड, प्रवक्ता, युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट –आईस)
(अमेरिकामा रहेका सबै अध्यागमन जेलहरु युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस) को माताहतमा संचालन भइरहेका छन् । हामीले त्यस्ता अध्यागमन जेलहरुको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थालगायतका विषयमा युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)का प्रवक्ता भिन्सेन्ट पिकार्डसँग विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश ।)
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस) ले कसरी गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिरेकाहरुलाई पक्राउ गर्छ र बन्दीगृहमा राख्छ ? युएस कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) ले पक्राउ परेकाहरुलाई कसरी आईसलाई हस्तान्तरण गर्छ ? आईस र सीबीपीबीचको सम्बन्ध के हो ?
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस) र युएस कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगतका दुइवटा भगिनी संगठनहरु हुन् । सीबीपी बर्दीधारी प्रहरी निकायजस्तै काममा लागिरहेको हुन्छ । सीबीपीले अमेरिका छिर्ने नाकाहरुमा काम गर्छ । उनीहरुले अमेरिका छिर्दै गरेका र अमेरिकाबाट बाहिर जाँदै गरेका व्यक्ति र उनीहरुका सामानहरुको परीक्षण गर्छन् । तर आईसले भने होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगत बर्दीधारी प्रहरी निकायका लागि जासुसी र अनुसन्धानकर्ताका रुपमा काम गर्छ । आईसले सीबीपीसँग मिलेर अनुसन्धानको त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्छ, जसमा अमेरिकाको संघीय कानुनको उल्लंघन भएको हुनसक्छ । त्यसैगरी आईसले अमेरिकाभित्रको भूभागमा अमेरिकी अध्यागमन कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समेत काम गर्छ । अमेरिका आउँदै गरेका त्यस्ता व्यक्ति जो अमेरिकामा रहनका लागि स्वीकृतिप्राप्त छैनन् उनीहरुकाबारेमा अनुसन्धान गर्छ । त्यस्तै कोही व्यक्ति कानुनी रुपमा नै अमेरिकामा छिरेको छ तर उसले केही अपराध गर्छ, भिसा अवधिभन्दा धेरै बसेको छ वा कुनै कारणवश कानुनी इमिग्रेशन स्टाटस गुमाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई आईसले हिराशतमा लिनसक्छ र डिपोर्टेशनको प्रकृयामा हाल्न सक्छ ।
कस्तो अवस्थामा गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिरेकाहरुलाई बन्दीगृहमा राखिन्छ र कस्तो अवस्थामा तुरुन्तै जताबाट आएको हो उतै फर्काइन्छ ?
हामीसँग अध्यागमन कार्यान्वयन र अमेरिकामा कुनै व्यक्तिको प्रवेशका सम्बन्धमा धेरै स्पष्ट प्राथमिकता र अवधारणाहरु छन् । म सीबीपी कसरी कृयाशिल हुन्छ भन्ने बारेमा केही बताउन सक्दिन । किनभने उनीहरुका आफ्नैखाले प्रकृयाहरु छन् । तर, आईसका सन्दर्भमा हामीले अमेरिकामा गैरकानुनीरुपमा भर्खरै छिरेका वा अमेरिकामा अपराध गरेका व्यक्ति विरुद्ध अध्यागमन कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा लिने र डिपोर्टेशनको प्रकृयामा हाल्नेमा हामी केन्द्रित छौं । यदि कोही व्यक्ति अमेरिकामा भिजिटर भिसामा आउँछ र त्यसपछि उसले मादकपदार्थ लिएर गाडी चलाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आईसले हिरासतमा राख्छ । सुरुमा जुन एजेन्सीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो, उसैमार्फत त्यस्तो व्यक्तिमाथि लागेको आपराधिक अभियोगबारे हेरिन्छ । जब उसमाथि लागेको आपराधिक अभियोगबारे फैसला भएर सबै सेटल हुन्छ अर्थात् उसले गरेको अपराधका लागि सजाय भोग्छ त्यसपछि उसलाई आईसले डिपोर्टेशनका लागि हिराशतमा राख्छ । त्यसैले हामीले अमेरिकामा अपराध गर्नेहरु र गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्नेहरुविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गरिरहेका हुन्छौं ।
अमेरिकामा आईसको बन्दिगृहमा धेरै सानो प्रतिशतमा मात्र मान्छेहरु रहेका छन् । अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुनसक्नेगरी इमिग्रेशन अदालतमा डिपोर्टको प्रकृयामा रहेका मुद्दाहरु अत्यन्तै कम छन् । कागजपत्र नभएकाहरुको कुल संख्याको त्यस्तै २ प्रतिशत मात्र बन्दीगृहमा छन् । कुनै व्यक्ति आईसको हिराशतमा आइसकेपछि हामीले उसको मुद्दा हेर्छौं । हामीले जे गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ त्यही हिसाबले निर्णय लिन्छौं । केही व्यक्तिलाई अमेरिकाको कानुन अनुशार अनिवार्य डिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया जसले गम्भिर प्रकारका अपराध गरेको छ, उसलाई डिपोर्ट गर्नैपर्ने हुन्छ । अमेरिकाको कानुन अनुशार कसैले जघन्य अपराध गरेको छ भने वा अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा बसिरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले बन्दीगृहमा राख्न गइरहेको हुन्छौं र उसलाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गर्नका लागि प्रभावकारिता खोजिरहेका हुन्छौं । हामीले गैरकानुनी रुपमा तत्काल अमेरिका छिरेकाहरुलाई बन्दीगृहमा राख्न प्राथमिकता दिन्छौं । जस्तो कुनै व्यक्ति मेक्सिकोबाट गैरकानुनी रुपमा सिमापार गरेर हिडेर अमेरिका छिर्छ र उसले अमेरिकामा बस्नुपर्ने कुनै कारण पेश गर्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी उसैको देशमा यथाशक्य फिर्ता पठाउँछौं । आईसको बन्दीगृहमा ९८ प्रतिशत मान्छेहरु भर्खरै गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर आएकाहरु वा अमेरिकामा अपराध गरेर डिपोर्टशेनको प्रकृयामा रहेकाहरु छन् । त्यो बाहेकका व्यक्तिहरुलाई हामीले हिराशतमा लिदैनौं । उनीहरुको मुद्दा अध्यागमन अदालतमा हुन्छ, उनीहरु अमेरिकाबाट देश निकालाको प्रकृयामा हुन्छन् तर पनि उनीहरु परिवारसँगै बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरु हरेक केही महिनामा अदालतमा उपस्थित हुन्छन्, उनीहरुलाई हामीले हिराशतमा लिदैनौं ।
कोही व्यक्तिलाई हिराशतमा लिइसकेपछि डिपोर्टेशनको प्रकृया कस्तो हुन्छ ? के उनीहरु फेरी भिसामा अमेरिका आउन सक्छन् ?
यो विभिन्न कुरामा भरपर्छ । हरेक व्यक्तिका मुद्दा फरक हुन्छन् । जब कोही व्यक्ति अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुन्छ उसका लागि अमेरिका छिर्न फरक फरक खालका बार लाग्छ । त्यो बार भनेको त्यस्तो व्यक्तिले निश्चित समयसम्मका लागि अमेरिका आउनका लागि भिसा वा कागजात नपाउने हो । कहिलेकाँही यस्तो बार ५ वर्षको हुन्छ, कहिले १० वर्षको हुन्छ भने कहिलेकाँही २० वर्षको पनि हुनसक्छ । कोही व्यक्तिले आक्रमणको अपराध गरेको छ र उसले आफ्नो सजाय जेलमा काटेर डिपोर्ट भएको छ भने उसलाई पुनः अमेरिका छिर्नका लागि २० वर्षको बार लाग्छ । तर कुनै पनि व्यक्तिले बार हटाउनका लागि सुविधाका लागि अनुरोध गर्न त सक्छ, तर त्यो प्रकृया निकै जटिल हुन्छ ।
आईसको बन्दिगृहमा रहेका व्यक्तिले एसाइलमका लागि आवेदन दिएमा के प्रकृया हुन्छ ? केही रिपोर्ट अनुशार केही व्यक्ति लामो समयसम्म पनि बन्दीगृहमा राखिएको पाइन्छ । बन्दीगृहमा रहेको व्यक्ति मुक्त हुनका लागि कति समयसम्म लाग्छ ?
हामीले एसाइलमको काम गर्दैनौं । युएससीआईएसले गर्छ । एसाइलमको लागि दावी गर्ने एउटा प्रकृया हो । त्यसबारे युएससीआईएसले एसाइलम गर्ने व्यक्तिलाई उसको देश फर्कनका लागि उपयुक्त डर भए नभएको निक्र्यौल गर्छ । त्यसै अनुशार प्रकृया अगाडि बढ्छ । हरेक व्यक्तिका केस फरक हुन सक्छन् । एसाइलम दावीको आधारमा धेरैकुरा फरक पर्छ । उनीहरुको पृष्ठभूमी र इतिहासले धेरै कुराको प्रभाव पार्ने भएकाले हरेकको मुद्दा हेरेर निक्र्यौल गरिन्छ ।
बन्दीगृहमा रहेका व्यक्तिमाथि दुब्र्यबहार हुने गरेका कैयन रिपोर्टहरु आउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको सुधारका लागि कुनै पहल भईरहेको छ ?
हामीसँग बन्दीहरुको राम्रो हेरचाह भएको निश्चित गर्ने कामयावी संयन्त्र छ । बन्दीहरुको स्वास्थ्य र सुविधा आइस र सम्बन्धित निकायका लागि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति बन्दीगृहमा जान चाँहदैन । कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउँदा आनन्दित हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले व्यक्तिका असन्तुष्टि बुझ्छौं । तर हामीसँग बन्दीहरुमाथि दुब्र्यबहार नभएको निश्चित गर्ने संयन्त्रहरु छन् । कसैमाथि नराम्रो व्यवहार भएमा बन्दीहरुले पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर यसबारे जानकारी दिन सक्छन् । उनीहरुले कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली पनि छ । उनीहरुले राम्रो खाना वा स्वास्थ्यउपचार पाएका छैनन् भने फर्म भरेर उजुरी दर्ता गराउन पनि सक्छन् । त्यसैले उनीहरुका कुनै गुनासा भएमा त्यसबारे उजुरी गर्ने थुप्रै उपायहरु छन् । धेरैजसो समय कैयन संगठनहरुबाट अज्ञात रुपमा उजुरीहरु आएका हुन्छन्, जसमा उनीहरुले सबै डिटेन्सन सेन्टरहरु बन्द गराउन चाहेका हुन्छन् । हामीले त्यस्ता दावी र उजुरीहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । यसबारे कुनै निश्चित उजुरी आउँदा हामी त्यस्तो आरोपको अनुसन्धान गर्छौं । तर साधारणतया हामीले उजुरी गरिजस्तो अवस्था पाउँदैनौं ।
अब नेपालको बारेमा कुरा गरौं, गत महिना अमेरिकी सरकारले नेपाललाई टीपीएसको दर्जा दियो । नेपाली बन्दीहरुका सन्दर्भमा अब कसरी आईसले उनीहरुलाई टीपीएसका लागि आवेदन दिनका लागि मौका प्रदान गर्छ ? उनीहरु आफै पनि टीपीएसका लागि आवेदन दिन सक्छन् वा कुनै वकिल लगाउन सक्छन् ?
टीपीएस भनेको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस हो । यो आईस आफैले गर्दैन । यसबारे पनि युएससीआईएसले काम गर्छ । त्यसैले म बन्दीहरुका सन्दर्भमा टीपीएसले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे अहिले नै बताउन सक्दिन । बन्दीगृहमा रहेका सबै बन्दीहरुसमक्ष लाइब्रेरीसम्मको पहुँच हुन्छ । लाइबे्ररीबाट उनीहरुले अध्यागमन कानुन र प्रणालीका बारेमा धेरै जानकारी पाउन सक्छन् । बन्दीगृहमा सबै प्रकारका कागजातहरु उपलब्ध छन् । कसरी आवेदन दिने, कुन फर्म प्रयोग गर्ने लगायतका सबै विधिहरु उनीहरुले लाइब्रेरीबाट सिक्न सक्छन् । बन्दीगृहमा रहेका बन्दीहरुका सन्दर्भमा टीपीएसको प्रकृया के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई कुनै सर्कुलेशन नआएकाले मलाई यसबारेमा थाहा छैन ।
उसो भए होमल्याण्ड सेक्युरीटीले नेपाललाई टीपीएसको दर्जामा राखेपछि पनि आइसले कागजपत्र विहिन नेपालीहरुलाई पक्राउ गर्छ त ?
मैले यसबारेमा निश्चित मुद्दाहरुलाई हेर्नुपर्छ । यदि कसैले कुनै अपराध गर्छ भने उसले टीपीएस गुमाउन सक्छ । टीपीएस पाएको व्यक्तिले अपराध गर्दा उसलाई पक्राउ नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । टीपीएसबारे आइसको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा म यसबारे अहिले केही भन्न सक्दिन ।
अमेरिकामा रहेका अन्य जेलहरु र आईसले संचालन गर्ने बन्दीगृहमा के फरक छ ?
आईसले संचालन गर्ने बन्दीगृहहरु नागरिक बन्दीगृहहरु हुन् । हामीले कसैलाई दण्ड दिनका लागि नभई अध्यागमन कानुनको कार्यान्वयनको प्रकृयामा मात्र व्यक्तिलाई बन्दीगृहमा राख्छौं । त्यसैले आइसले संचालन गर्ने बन्दीगृह र अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नका लागि राखिने बन्दीगृहरुबीच धेरै कुराको समानता र धेरै कुराको फरक छ । नागरिक बन्दीगृहहरु अल्क्षी प्रकारका हुँदैनन् । हाम्रा बन्दीगृहहरुमा औषतमा व्यक्तिलाई एकमहिनासम्म राख्ने गरिन्छ । सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई आइसको हिराशतमा ल्याइसकिएपछि राख्ने अवधि औषतमा ३० दिन रहेपनि हालका दिनमा त्यो अलिकति लामो हुनसक्छ ।
मानवतस्करहरुले अमेरिका छिराउने व्यक्ति पक्राउ पर्ने गर्छन् तर मानवतस्कहरु भने खुलेआम घुमिरहन्छन् । यसबारे आईस सचेत छ ?
अहिले नेपाली मानव तस्करबारे हामीले कुनै अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छैनौं । मानव तस्करीका सन्दर्भमा हामीसँग विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु छन् । हामीले मानवतस्करहरु विरुद्ध अपराध गरेका र अध्यागमन प्रणालीविरुद्ध गतिविधि गरेका मुद्दाहरु लगाउँछौं ।